शान्त धुन्चे – Discovery4p.com
discovery4p Travelouge Leaveacomment 170 Views
मैले सुनेको धुन्चेले काँचुली फेरेको रहेछ। मेरा मानसपटलमा रसुवाको प्रख्यात धुन्चेमा ससाना घर थिए, ढुङ्गाको छाना भएका घर थिए तर यहाँ त ठूलठूला घरहरू प्रशस्त रहेछन्। घरका छाना कि त ढलानयुक्त कि जस्ताका। यी ढलानयुक्त घरले मलाई सिक्किमको सम्झना गरायो।
समयक्रममा गोसाइँकुण्डको यात्रामा जाने परिवारका सदस्यहरू बढ्दै गए, कोही खुट्टा दुखाएर आउँने, कोही जुकालाई टोकाएर आउँथे, कोही धुन्चे पुग्नु अगाडिदेखि नै गगनभेदी पहाड देखेर नै रिँगटा लागेको महसुस गरेर फर्कन्थे । ओहो ! अनुभव जेजस्तो भए पनि गोसाइँकुण्डको यात्रा अविस्मरणीय बनाएर फर्कन्थे। तर मलाई भने धेरै हिँड्नु पर्ने कुराले गोसाइँकुण्ड जाने आँट कहिल्यै पलाएन र धुन्चेलाई छुने अवसर पाएको थिइन। तर यो वर्ष भने काम विशेषले पटक पटक कार्यक्रम परिवर्तन भए पनि धुन्चे पुग्ने मौका मिल्यो, मात्र धुन्चेसम्मको गन्तव्य।
मैले सुनेको धुन्चेले काँचुली फेरेको रहेछ। मेरा मानसपटलमा रसुवाको प्रख्यात धुन्चेमा ससाना घर थिए, ढुङ्गाको छाना भएका घर थिए तर यहाँ त ठूलठूला घरहरू प्रशस्त रहेछन्। घरका छाना कि त ढलानयुक्त कि जस्ताका। यी ढलानयुक्त घरले मलाई सिक्किमको सम्झना गरायो। तलबाट उठाएर बनाइएका ८–९ तल्ले घर तर बाटोमा देखिँदा १–२ तल्लामात्र देखिने दृश्य वास्तबमा तित्ताकर्षक थिए।
२०७१ सालदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको रसुवागढी नाका पुग्न पहिला यही धुन्चे हुँदै कन्टेनरहरू गुड्थे । दैनिक २ सयभन्दा बढी गाडी चीनको केरुङ, नेपालको रसुवागढी नाकाहुँदै व्यापारिक सामग्रीसहित आउँथे । भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि यो बाटो नै विकल्प बनेको थियो भने २०७४ सालमा यो नाकालाई चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेसँगै यसको चहलपहल अझै बढेको थियो । तर पछिल्लो समय रसुवागढी जाने गाडीहरू, ठूलाठूला कन्टेनर मैलुङ–स्याफ्रुको तल्लो बाटोबाट जान थालेपछि धुन्चेबासीले राहत महसुस गर्न थालेका छन् । स्थानीय होटल संघका महासचिव निशान भन्छन्, ‘डब्बा (कन्टेनर)हरू तल्लो बाटो जान थालेपछि धुन्चेबासीलाई राम्रै भएको छ ।’ वातावरण फोहर हुन्न, धेरै आवाज आउँदैन, पर्यटकहरू शान्तसँग बस्न पाएका छन् । धुन्चे शान्त भएको छ .
Previous बौरिँदै गोरखामा घरहरू
Next गुठी प्रथाः लिच्छविकालभन्दा पुरानो